कसरी बढ्दो समायोजित वास्तविकताले प्रभावकारी मार्केटिंगलाई असर गर्छ? | Martech Zone
COVID-19 ले किनमेल गरेको तरिका परिवर्तन भएको छ। बाहिरको महामारीको साथ, उपभोक्ताहरूले रहनको लागि रोज्नेछन् र यसको सट्टामा अनलाइन वस्तुहरू खरीद गर्नुहोस्। त्यसकारण उपभोक्ताहरू प्रभावकारीमा कसरी अझ बढी भिडियोहरू ट्यून गर्दै छन् लिपस्टिकमा प्रयास गर्नदेखि लिएर हाम्रो मनपर्ने भिडियो गेमहरू खेल्नको लागि भिडियोहरू। प्रभावकारी मार्केटिंग र मूल्य निर्धारणमा महामारीको प्रभावमा अधिकको लागि, हेर्नुहोस् हाम्रो भर्खरको अध्ययन.
तर यो कसरी विश्वास गर्दछ कि देख्न छ कि आइटम को लागी काम गर्दछ? तपाईंले भण्डार नमूना राख्नु भएको लिपस्टिक खरीद गर्नुहोस् यो दृश्य नदेखीएको अर्डर गर्नुबाट रोइदिएको छ। तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि यो कसरी खरिद गर्नु अघि तपाइँको अनुहारमा देखिनेछ? अब एक समाधान छ र प्रभावकर्ताहरूले हामीलाई रमाईलो, प्रामाणिक, र मनोरन्जनकारी सामग्रीको साथ देखाउँदै छन्।
अब, हामी सबै देख्यौं संवर्धित वास्तविकता (एआर) केहि रूप मा। तपाईंले सायद प्रभावकारीहरू आफुलाई भिडियोहरू साझा गरेको याद गर्नुभएको छ cutesy डिजिटल पिल्ला कान र नाक लगाएका छन्, वा उनीहरूको अनुहारमा उमेर फिल्टरहरू। तपाईंलाई केहि वर्षहरू याद हुन सक्छ जब सबैले शहर भरका पोकेमोन क्यारेक्टरहरू पीछा गर्न उनीहरूको फोनहरू प्रयोग गरिरहेका थिए। त्यो एआर हो। यसले कम्प्युटरले जेनेरेट गरेको छवि लिन्छ र तपाईंको फोनमा सुपरइम्पोज गर्दछ, ताकि तपाई पिकाचु तपाईको अगाडि उभिरहेको देख्नुहुनेछ, वा तपाईको अनुहार देखिने तरीकाले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। एआर पहिले नै यसको मनोरन्जन मूल्य को कारण सोशल मीडिया मा लोकप्रिय छ। तर त्यहाँ धेरै सम्भावना छ ecommerce को दुनिया भित्र। के तपाईं आफ्नो ओछ्यानमा उठे बिना आफ्नो अनुहार मा कि लिपस्टिक देख्न सक्छ भने के हुन्छ? के तपाईं क्रेडिट कार्डमा पुग्नु भन्दा पहिले आफ्नै घरको आराम र सुरक्षाबाट फरक देखिने कुराको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ? एआर को साथ, तपाईं ती सबै र अधिक गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै ब्रान्ड यस टेक्नोलोजीमा उफ्रँदै छन्, जुन सुधार जारी राख्ने अपेक्षा गरिन्छ। शृ to्खलादेखि लिएर नेलपलिशसम्म जुत्तासम्म, बजारहरूले यो रोचक प्रविधि प्रयोग गर्न नयाँ नयाँ तरिकाहरू फेला पारिरहेका छन्। ती राम्रा पिल्ला कानहरूको सट्टामा, तपाईं नयाँ जोडी चश्मा वा बाह्रमा प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। इन्द्रेणीहरू र बादलहरू तपाईको टाउको माथि तैरिरहनुको सट्टा, तपाई आकारका लागि नयाँ कपालको रंग कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं भर्चुअल स्नीकरको एक जोडीमा हिंड्न पनि सक्नुहुनेछ। र दृश्यहरू सबै समय बढी यथार्थवादी बढ्दैछन्।
भर्चुअल ट्रान्स-ons, यस नयाँ प्रवृत्ति भनिन्छ, रमाईलो छन् र शायद औसत उपभोक्ता को लागी एक थोरै लत। अनुमानित million० करोड सामाजिक नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरूले २०२० मा एआर प्रयोग गर्दछन्। त्यसोभए प्रभावकारीहरूले के गर्न सक्छन् यस सबैमा? सुरूवात गर्नका लागि, आफ्नै प्रयासहरू फेशन र सौन्दर्य उद्योगहरूमा सयौं लाख अनुयायीहरू सम्म पुग्नेछन्, उपभोक्ताहरूलाई सीधा उनीहरूको लागि वरिपरि खेल्नको लागि उनीहरूको मनपर्ने ब्रान्डको अनुप्रयोगहरूमा। ब्राण्डहरू जुन एआरमा पक्रिएनन् उनीहरू आफैंलाई एक हानिमा फेला पार्नेछन् किनकि प्रभावकारीहरूले उनीहरूका अनुयायीहरूलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोगका लागि ड्राईभमा पठाए।
जसरी एआर टेक्नोलोजीमा सुधार आयो, प्रभावकर्ताहरूले उनीहरूले कसरी हेर्ने छन् भनेर देखाउन कपडाको कुनै वस्तुको स्वामित्व पनि आवश्यक पर्दैन, जसको अर्थ द्रुत दरमा बढी सामग्री। प्रत्यक्ष भर्चुअल फेशन शोको लागि प्रभावकारी टीमको रूपमा सम्भावनाहरू कल्पना गर्नुहोस्। विशाल अनलाइन घटनाहरू प्रभावकारीहरूको समूहको अवधारणाको वरिपरि सिर्जना गर्न सकिन्छ प्रयास गर्दै उस्तै पोशाकहरू देखाउनका लागि तिनीहरू कसरी शारीरिक आकार र आकारका विभिन्न प्रकारमा देखा पर्नेछन्। र यो सबै व्यवस्था गर्न सकिन्छ तिनीहरू मध्ये कसैलाई कहिल्यै आफ्ना बस्ने कोठा नछोडी।
तर फेशन र सौन्दर्य प्रयास-ons मात्र एआर को लागी प्रयोग गर्दैन। एक शक्तिशाली डेमो उपकरणको रूपमा, एआर प्रभावकर्ताहरूको उत्पादन प्रदर्शन गर्नका लागि उत्तर हो जुन भिडियो मार्फत हेर्नु आवश्यक छ। यसको अर्थ हेयरकेयर उत्पादनहरूको सही प्रयोग प्रदर्शन गर्न सक्दछ, तर यसले गेमिंग उद्योग जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार गर्न सक्छ, जस्तै भिडियो खेलहरू देखाएर। घरेलु उद्योगमा, आईकेईएले आईकेईए प्लेस नामको एक अनुप्रयोग सुरू गरिरहेको छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई खरीद गर्नु अघि, घरको छेउमा राखेर, र यसलाई सबै सँगै राख्ने प्रयासमा जान अघि उनीहरूको घरका विभिन्न फर्नीचरको प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ।
कल्पना गर्नुहोस् अनलाइन घटनाहरू जसमा प्रभावकारीहरूले तपाईंलाई उनीहरूको घरको भ्रमण गरेर कस्तो भइरहेको देखाउँदछन् र उनीहरूको भोजन कोठामा कुन नयाँ टेबल राख्ने भनेर प्रत्यक्ष मतदान सञ्चालन गर्छन्। त्यहाँ टेक्नोलोजी खिल्दा रचनात्मकताको लागि यति धेरै ठाउँहरू छन्।
हामीलाई थाहा छ कि युट्युब प्रभावकारीहरूको भिडियोको साथ विस्फोट भयो किनकि अनुयायीहरूले नयाँ प्रकारका सामग्रीहरू चाहन्छन्। लगभग पाँच अरब भिडियोहरू प्रति दिन युट्यूबमा million० करोड दर्शकहरू द्वारा हेरिन्छ। एआर मूल रूपमा ढाँचा मा एक सुधार हो। यो विज्ञापन को अर्को पुस्ता हो। र एआरको सम्भावनाहरू शिक्षा र कर्पोरेट शिक्षा जस्ता वास्तविक-अनुप्रयोग अनुप्रयोगहरूमा मार्केटि beyond पछाडि विस्तार भएपछि पनि टेक मात्र राम्रो हुँदै जान्छ। चाँडै ब्रान्डले यसको फाइदा लिन्छ र यसले प्रभाव पार्ने मार्केटिंगले उनीहरूका लागि के गर्न सक्दछन्, तिनीहरू उत्तम हुनेछन्।
एक्सप्रेसर मार्केटिंग x एआरको बारेमा अधिक जान्नको लागि र यसले कसरी तपाईंको ब्रान्डलाई अर्को स्तरमा फैलाउन सक्छ, तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो टोलीबाट कोही २ 24 घण्टा भित्र पुग्नेछ।
A&E सम्पर्क गर्नुहोस्
A&E को बारेमा
A&E एक डिजिटल एजेन्सी छ कि सबैभन्दा ठूलो छ ग्राहक पोर्टफोलियो फॉर्च्युन companies०० कम्पनीहरूको जस्तै कि वेल्स फार्गो, J&J, P&G, र नेटफ्लिक्स। हाम्रो संस्थापक, अमरा र एल्मा, २.२ लाख भन्दा बढी सामाजिक अनुयायीहरूको साथ ठूला प्रभावकर्ताहरू हुन्; A&E को बारेमा अधिक हेर्नुहोस् फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग टेलिभिजन, वित्तीय समय, इंक, र व्यापार इनसाइडर भिडियो.
टैग: ए & इअम्रा र एल्माaraugmented वास्तविकतासौन्दर्यफैशनikea स्थानप्रभावकारी विपणनप्रभावकारी प्रयास-माभर्चुअल प्रयासभर्चुअल प्रयास-onsYouTube
सुश्री बेगानोविच नेतृत्व गर्दछ A&Eविश्व प्रसिद्ध साझेदारहरु र ग्राहकहरु को सूची निर्माण मा प्रयासहरु। उनको विशेषज्ञताको क्षेत्रले भूमिका खेल्ने भूमिका समावेश गर्दछ जुन A&E ले विभिन्न उद्योगहरूमा विभिन्न ब्रान्डहरूको लागि खेल्न सक्छ, साथै ती साझेदारीहरूको सर्तहरू र क्षेत्र विकास गर्दछ।